Deji Sanduuqa Sare, Shaashadda Bandhigga, Shaashadda Saqafka Baabuurka - Yunting
la awoodi karo
Tayo sare oo qiimo jaban ah.
Ciyaartoyga DVD-ga gaadhiga, Ciyaartoyga DVD gaadhiga gaarka ah, GPS-ka gaadhiga, muraayada madaxa gaariga oo leh/la'aanteed ciyaaryahan DVD.
Matoorka farsamaynta sawirka tayada sare leh ee lagu dhex dhisay si loo horumariyo tayada sawirka.
Tayada codka wanaagsan
Ku-hadlayaasha stereo-ga waxay bixiyaan codka tayada masraxa.
11.6 inch Saqafka Buur Flip Down Monitor
9 INCH baska la laaban karo ee TV Monitor 1080P gaadhi Video tv HD gaadhiga Android Roof Monitor ee baska safarka
10 INCH saqafka sare-ku-saaran ciyaartoy-badane-media oo leh HD 1080p 19.5-inji LCD ah
12.1 INCH Shaashadda saqafka gaariga
13.3 inch saqafka gaariga HD kormeeraha
11.6 INCH baska dusha sare ee shaashadda saqafka kormeeraha nidaamka madadaalada tv-ga
12 INCHBus muraayada gaariga HD cusub super slim 19.5 inch Android hoos u dhig kormeeraha saqafka
13.3 INCH-ku-dhismay nalka qubbad laba-geesoodka ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad daawato kuwa aad ugu jeceshahay wakhti kasta oo maalinta ah
In ka badan 13 sano
In ka badan 60
dalka loo dhoofiyo
In ka badan 13 sano oo waayo-aragnimo ah
Waxaa la aasaasay 2008, shirkadeena waxay u kortay shirkad ganacsi oo caalami ah oo guulaysata oo xarunteedu tahay Guangzhou iyo xafiisyo ku yaal Chengdu China ...
Adeegga heerka koowaad
Waxaan awoodnaa inaan si guul leh u daboolno baahiyaha suuqyada caalamiga ah iyada oo loo marayo qiimaha tartanka, tayada, kalsoonida, bixinta wakhtiga iyo heerarka ugu sarreeya ee adeegyada.
Waxaan u heellannahay heerarka sare ee anshaxa ilaha, oo leh alaab-qeybiyeyaal aan la shaqeynay sannado, kuwaas oo lagu kalsoonaan karo oo ku tiirsan tayada sare iyo awoodaha wax soo saarka ee xooggan.
Ku qanacsanaanta macaamiisha
Ka hel ammaan sare macaamiisha.
Si taxadar leh u hubi faahfaahin kasta oo alaabta ah.
Tayada sare ka hor iyo ka dib iibka.
Juun 02, 2022
Kormeeraha saqafka sare ee baska 15.6-inch cusub
Maarso 18, 2022
Buug-gacmeedka Alaabooyinka Saqafka Sare ee Kormeeraha 1. Alaabooyinka Aasaaska ah ee PARAMETERS 12.1'' Qaraarka 12808*RGB*800 Luminance 400cd/m2 Isbarbardhigga 800:1 Interface Nooca LVDS Saqafka Guud Master chip MSTV59 OSD Menu Language Adjustment/Contrast Ratio ...
Janaayo 05, 2022
Shaashada taabashada oo ah nooc cusub oo isdhexgalka kombuyuutarrada ah, oo si weyn loogu isticmaalo dhammaan noocyada nidaamka macluumaadka dhijitaalka ah, laga bilaabo alaabooyinka yaryar sida saacadaha smart, kamaradaha dhijitaalka ah, iwm, ilaa alaabada dhexdhexaadka ah sida socodka gaadiidka, taleefannada gacanta. , kombuyuutarrada tablet-ka ah, qalabka guriga...
Sebtembar 23, 2021
Agoosto 24, 2021
1. Daaqadda dambe ee madadaalada Haddii muraayadda dhinaca daaqadda ay tahay bandhig is-dhexgal ah, waxay u isticmaali kartaa sida sawir-gacmeedka oo keliya, oo soo dejiso software-ka dhammaan noocyada madadaalada.Carruurta, waxay wax ku qori karaan, sawiri karaan oo wax ku baran karaan iyaga oo dhex maraya Windows-yada, iyo mashiinka barashada mobaylada iyo encyclopedia...